Ngaba iGoogle Cookie iyawa? | Martech Zone
Lwesine, Disemba 18, 2008 NgoMvulo, nge-22 kaDisemba ngo-2008 Douglas Karr
Ndinayo le ngcamango yokuba akukho nto ingenakulinganiswa. Amashishini aphumeleleyo ahlala edlula ukubanakho ukulawula ukukhula, iitekhnoloji ezisebenza kakhulu kwinqanaba elincinci kunqabile ukuba zenze umsebenzi kwizinga elikhulu… nkqu nabasebenzi bahlala bekonyuselwa ngaphaya kwamandla abo.
Uphando ibone ukukhula ngendlela engazange ibonwe kule minyaka ilishumi idlulileyo. Kangangexesha elide besizibambe saya ekukhanyeni saza sazisebenzisa njengomlinganiselo wempumelelo yethu. Izolo, siye sathoba ibha nangona, siqala ukuphanda ngaphandle kweendonga zethu kwaye sijonga nzima kuGoogle xa kukho into engaqhelekanga eyenzekayo.
Ukusilela kukaGoogle ku Mva nje:
Namhlanje bendiza kuphawula ngebhlog yomhlobo wam uErik zebloga (Indoda ihlasela intombi kunye ne-cheeseburger), kodwa andikwazi kufumana iphepha lamagqabaza ukuba lilayishe.
Kwiintsuku ezimbalwa, besingakwazi ukubhalisa naziphi na iisayithi nge Ikhonsoli ye Khangela yeGoogle. Indawo yaqhubeka nokusinika impazamo yokuqinisekisa ukuba sibuyisa iikhowudi ezingachanekanga kwi-404 yethu (iphepha elingafunyenwanga). Ngapha koko, yethu iqonga kubloga yequmrhu wayebuyisa iikhowudi ezifanelekileyo. Kusuku okanye emva koko, konke kwakulungile kwakhona!
Google Reader kuhlala kubonakala kunjalo ukutsiba kum, kundibonisa ukutya esele ndikufundile… ukuphindaphinda okuphindaphindiweyo.
Similisele i- google Analytics iakhawunti yomthengi kule veki ibonise ukuba indawo iqinisekisiwe kwiphepha elinye, ayiqinisekiswanga kwelinye iphepha, kwaye ibingathathi stats. Kwafuneka siyicime iakhawunti kwaye siqale ngokutsha.
UKUHLAZIYA: 12/21 -Kususela oko ndaguqula isondlo sam saya kuGoogle, andinakungena kwaye ndifumane izibalo zam kunye nedilesi yam endala yokondla ayinakuhlaziya.
Ekuphela kwento uGoogle angakhange asilele kuyo kukubonisa intengiso efanelekileyo. Hmmmm.
tags: amaxabiso esongezo-kwinqwelo-mafuthamobile sdkYenzanimarblesinkwenkwezii-starbucks usetyenziso lwefowuniJonga ngoku Ukuzonwabisa
Ngomhla wama-19 ku-Disemba 2008 ngo-6: 57 PM
Kumnandi ukwazi ukuba uGoogle akakasileli ukuhambisa iintengiso kuthi. Ndiyaziqonda ezinye zeenkonzo zasimahla eziphantsi ngamanye amaxesha, kodwa into endixhalabisayo kuxa ii -apps zabo "zodidi lweshishini" (iposi ebanjiweyo, iiapps, njl.njl. Ngaphandle kokukhankanywa ukuba kutheni okanye nini baya kubuya. Ixesha elilahlekileyo, elishishini lam lithetha ukulahleka kwemali. Eyona mali kuthiwa ndiyonga ngokungazisebenzisi izinto zam.
Ngomhla wama-22 ku-Disemba 2008 ngo-11: 56 AM
Ndikhe ndaneengxaki ezithile kunye nebhlog yam ngokunjalo. Ungayichazanga eyam, Izilumkiso zikaGoogle ziya kubhonkers. Ndiyavuya ukwazi ukuba ayindim ndedwa ophawula oku!